Dhexgal naftaada Dagaalkii Labaad ee Aduunka 'Battlestations: Pacific', oo iib ah waqti xaddidan | Waxaan ka socdaa mac
Dhexgal WWII adoo adeegsanaya 'Battlestations: Pacific', oo iib ah waqti xaddidan
Ciyaarta Feral Interactive 'Goobaha Lagu Dagaalamayo: Baasifigga' Waxaa la iibinayaa waqti xaddidan in Mac App Store Waqti Xaddidan. Ciyaarta ayaa badanaa lagu qiimeeyaa 19,99, oo hadda uun 7,99 Adiga ayaa noqon kara Dagaalkii Baasifiggu wuxuu ka mid yahay Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo khilaafyadii ka horreeyay ee ka dhacay Badweynta Baasifigga, jasiiraddeeda, iyo Bariga Aasiya.
Ciyaarta waxaad ku noolaan doontaa dagaalka laba sagas epic oo aad sheekada qayb ka noqon doontid. Dareemo xoogga dagaallada taariikhiga ah iyo go'aanka Dagaalkii Baasifigga. Ku noolow markii ugu horeysay qaar ka mid ah dagaalladii badda ee ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay WWII oo muhiim u ah taariikhda dhow, waa inaad hogaamisaa raxanadaada si dagaalku ugu dhammaado qaab gebi ahaanba ka duwan. Ciyaarta ayaa daaran Español, ka dibna waxaan kuu dhaafi doonaa a trailer ciyaarta si aad fikrad uga hesho makaanikada ciyaarta.
Ciyaarta waxaad dib u noolayn doontaa dagaalladii muhiimka ahaa ee Baasifigga hogaaminaya ciidamada Woqooyiga Ameerika laga bilaabo 'Dagaalkii Midway' ilaa 'Okinawa', ama si isku mid ah u amar qaadashada xoogagga boqortooyada Japan oo beddela habsami u socodka Dagaalkii Labaad ee Adduunka adigoo burburinaya 'Pearl Harbor' iyo ballaadhinta boqortooyadii qorraxda dhanka bada ilaa Hawaii. Xiga sawirka, waxaan kaaga tagaynaa shuruudaha ugu yar waxa Mac-gaagu u baahan yahay, waxaad nooga baahan tahay inaad haysato Mac awood leh oo awood u leh inuu ciyaaro.
La cusboonaysiiyay: 14/12/2011.
Cabbirka: 6.46 GB
luqadood: Isbaanish, Jarmal, Faransiis, Ingiriis, Talyaani.
Soo saare: Is-dhexgalka Cunnada.
U hoggaansanaanta: OS X 10.6.6 ama ka dib.
Waad iibsan kartaa ciyaarta 'Goobaha Lagu Dagaalamayo: Baasifigga' toos ugu kaydso Mac App Store, adoo gujinaya xiriiriyaha aan kaaga tagi doono xagga hoose. Ciyaarta ayaa ah iibinta waqti xaddidan sidaan horay u sheegnay bilowga boostada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Dhexgal WWII adoo adeegsanaya 'Battlestations: Pacific', oo iib ah waqti xaddidan